Bahrain: Nanamafy Ny Famoretana Haino Aman-jery Talohan’ny Tsingerintaonan’ny Hetsi-panoherana · Global Voices teny Malagasy
Bahrain: Nanamafy Ny Famoretana Haino Aman-jery Talohan'ny Tsingerintaonan'ny Hetsi-panoherana
Voadika ny 01 Febroary 2017 5:32 GMT
Sary avy amin'ny fifandonana teo amin'ny polisy sy ny mpanao hetsi-panoherana tao Bahrain tamin'ny 5 Febroary 2015 . Sary avy amin'i Sayed Hashim. Fizakàmanana: Demotix
Vao mainka nanamafy ny famoretana ny fahalalahan'ny fampahalalam-baovao i Bahrain mialoha ny 14 Febroary tsingerintaonan'ny fikomiana, rehefa nahazo saina tamin'ny fikomiana tany Tonizia sy Ejipta, nidina an-dalambe, ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny governemanta, ary niantso ho an'ny fanavaozana ara-politika sy ny fitovian-jo ho an'ny mponina Shiita maro an'isa ao amin'ny firenena.
Tamin'ny 16 Janoary, nandràra ny famoaham-baovaon'ilay hany gazety tokana tsy miankina ao amin'ny firenena, al-Wasat ny governemanta, tsy “hampiasa fitaovana haino aman-jery elektronika“. Midika izany fa tsy ny ao amin'ny tranonkalany irery ihany no voarara tsy hamoaka ilay gazety, fa ny fisiany an-tserasera amin'ny alàlan'ireo fantsonà haino aman-jery sosialiny ihany koa. Manana mpanaraka miisa 229K ao amin'ny Twitter ilay gazety ary maherin'ny 354K ao amin'ny Facebook. Manana fantsona YouTube, sy kaonty Instagram ihany koa ilay gazety.
Maty tao amin'ny fonjakelin'ny Sampan-daharaha miantoka ny Filaminam-Pirenena tamin'ny Aprily 2011, ny mpiara-manorina ny Al-Wasat, Karim Al-Fakhrawi, taorian'ny fampijaliana azy. Niatrika fampiatoana toy izany ilay gazety mpiseho isanandro tamin'ny lasa. Tamin'ny 2010 dia voarara tsy handefa tatitra am-peo sy ireo tafatafa ao amin'ny tranonkalany izy, raha noterena kosa tamin'ny taona lasa hanakatona ny sampana fizarana lahatsary hatramin'ny volana Aogositra tamin'io taona io ihany.
Nibitsika ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao fa noraràny ilay gazety mpiseho isanandro noho ny famoahana miverimberina sy fandefasana fitaovana izay miteraka hantsana eo ami'ny fiarahamonina izay manimba ny firaisam-pirenena sy ny filaminam-bahoaka”. Tsy mazava hoe inona ilay tondroin'ny ministera ho fitaovana, fa ireo mafana fo dia milaza fa angamba valin'ilay fandrakofam-baovao nataon'ny gazety (na tamin'ny aterineto na ivelan'ny aterineto) momba ny famonoana ho faty tamin'ny 15 Janoary ireo telo lahy voaheloka hp namono polisy telo taminà fanafihana tamin'ny baomba tamin'ny 2014 ilay fandraràna.
Nofaritan‘ireo vondrona Ankavanana ho tsy ara-drariny ny fitsarana ireo lehilahy, taorian'ny nanerena azy ireo hiaiky noho ny fampijaliana. Araka ny tatitry ny Foiben'ny Zon'olombelona any Bahrain:
ao amin'ny andiany natonta an-taratasy nivoaka ny 16 Janoary miaraka amin'ny lohateny lehibe, ny AlWasat no hany gazety ao Bahrain namoaka ny famonoana nitranga ny 15 Janoary. Nanasongadina ny sarin'ireo niharan'ny famonoana ny lahatsoratry ny AlWasat, miaraka amin'ny fomba fijerin'ireo fikambanana tsy miankina ao an-toerana sy ireo fikambanana tsy miankina iraisam-pirenena, ary ny tatitra momba ny fanehoankevitra nalaza teny an-dalambe.
Ao amin'ny fanjakan'ilay nosy misy mponina 1,2 tapitrisa, dia misy gadra politika maherin'ny 4.000 araka ny ny vinavina tamin'ny 2015 avy amin'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona .
Tanatin'ny zava-nitranga iray hafa, nanomboka tamin'ny 16 Janoary ny fitsarana an'i Nazeeha Saeed, masoivohon'ny Radio Monte Carlo Doualiya sy France24, taorian'ny nametrahan'ny Minisitry ny Fampahalalam-baovao fitarainana namely azy ho “manao asa fanaovana gazety tsy misy fahazoandàlana”. Nangataka ny hanavaozana ny fahazoandàlany hifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny i Saeed, izay niharan'ny fampijaliana tao amin'ny fonjakelin'ny polisy tamin'ny 2011, saingy notsipahan'ny ministera ny fangatahany.
Araka ny Lalàna Bahraini momba ny Gazety (Lalàna 47/2002), tsy maintsy mahazo fahazoandàlana mila havaozina isantaona ireo solontenan'ny fampahalalam-baovao vahiny, mba ho afaka hanatanteraka ny asany. Raha tsy manao izany izy ireo, dia mandoa ny lamandy ambony indrindra 1000 dinara Bahraini (eo amin'ny 2600 Dolara Amerikana) izy ireo. Araka ny andininy faha 89 ao amin'ilay lalàna, ny Ministera no manana ny fahefana hanafoana ny fahazoandàlan'ny solontena vahiny iray noho ny namoahana vaovao izay “misy idiran'ny fanitarana, famokarana, famitahana ary fanolanana ny fahamarinana.” Tamin'ny taona lasa, nandà tsy hanavao ny fahazoandàlan'ny ankamaroan'ireo solontena vahiny ny Minisitera, anisan'izany ny mpanao gazety sady mpakasarin'ny Agence France-Presse, Mohammed Al-Shaikh, ny mpakasary sady mpanao gazetin'ny Associated Press, Jamali Hasan, mpanao gazetin'ny AP, Reem Khalifa, ary mpakasarin'ny Reuters, Aamer Mohammed.
Nipoaka ny fifandonana mahery vaika teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny polisy, taorian'ilay vono olona tamin'ny Alahady. Tanaty herinandro vitsivitsy monja tsy hahatongavan'ny tsingerintaonan'ny fikomiana tamin'ny 14 Febroary, mbola henjana ny toe-draharaha any Bahrain. Toa vonona hampangiana izay mety ho haino aman-jery sisa tavela ho tsy miankina ry zareo manampahefana ary koa ireo feo manakiana izay heverin'izy ireo fa mandrahona ny fitondrana eo an-toerana.